Sameecadaha sameecadaha ugu horreeya ee OnePlus waxaa loo yaqaan 'OnePlus Bullet Wireless' waxaana loo soo bandhigi doonaa OnePlus 6 | Androidsis
Sameecadaha dhagaha la 'ayaa dhammaantood cadho badan, gaar ahaan tan iyo markii ay soo-saarayaashu bilaabeen inay ka soo baxaan mashiinka taleefannada gacanta casriga ah. Soo saaraha ugu dambeeyay ee ku soo biira liiska ayaa ah OnePlus, oo ah shirkad soo saare ah oo sidoo kale ka shaqeyneysa labo kumbiyuutar oo wireless ah oo loo yaqaan "OnePlus Bullets Wireless", sameecado dhageysi oo ay soo bandhigi karto iyada iyo midka xiga ee OnePlus 6, sida ku xusan liiska Shahaadada Bluetooth waxaa helay Nashville Chatter.
Liiskan waxaa soo saaray Teknolojiyada OnePlus oo hoos timaada nambarka nambarka BT31B, iyo taariikhda daahfurka waxay ku beegan tahay, in ka badan ama ka yar, soo bandhigga xiga ee OnePlus 6, kaas oo, in kasta oo aanu wali haynin taariikh rasmi ah oo lagu sii daynayo, haddana durba si ballaadhan ayaa loo faafiyey toddobaadyadii u dambeeyey. Hadday dhegaha la 'wireless-ka la yimaadaan' OnePlus 6 'ama si gooni gooni ah loo iibiyo waa su'aal kale, maaddaama calaamadaha oo dhami ay tilmaamayaan in OnePlus 6 uu wali haysto aaladda dhegaha.
OnePlus wuxuu hadda iibiyaa xirmooyin dhagaha la gashado oo loo yaqaan 'OnePlus Bullets (V2)', sameecadahaas waxay heleen dib u eegis raaxo leh waxaana lagu heli karaa qiimo aad u soo jiidasho leh. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida loo yaqaan 'OnePlus Bullets Wireless' marka loo eego xagga qiimaha iyo tayada codka ee dhiggeeda siligga ah, gaar ahaan tan dhegaha kale ee bilaa wabiga aysan ku noolaan ilaa laga filayo.
Shirkad kale oo iyaduna door bidday inay suuqa ka bilawdo sameecadaha dhagaha la 'wireless, iyagoon ku xisaabtamin Sony ama Samsung (oo iyagu horeba suuqa ugu soo bandhigay moodeel) waa Huawei. Shirkadda Aasiyaanka ah ee lagu soo bandhigay dhacdadii P20, ee Huawei FreeBuds, dhagaha la galiyay Apple's AirPods, laakiin sida laga soo xigtay soo-saaraha, waxay ku siisaa laba jeer is-maamul hal mar ah. Waa wax laga xumaado in Huawei ay miciin biday inay si toos ah u koobiyeeyso AirPods-ka halkii aad ka shaqeyn laheyd nashqaddaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Sameecadaha dhagaha ee ugu horeeya ee loo yaqaan 'OnePlus wireless earbuds' waxaa loogu yeeri doonaa OnePlus Bullet Wireless waxaana lagu soo bandhigi doonaa OnePlus 6.